Posted by yankin at 9:47 AM No comments:
ရိုးရာ ထုံးတမ်းဓလေ့ကို ၀င်သွားတဲ့အခါ..
အဲဒါဟာ ဘယ်လိုမျှ ရိုးရာထုံးတမ်းဓလေ့မဟုတ်တော့ဘူး..။
သူ့ရဲ နှလုံးသားဟာ ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာထဲမှာပဲ ရှိတယ်..။
ရိုးရာထုံးတမ်းဓလေ့မှာ နှလုံးသား မရှိတဲ့အခါ..
အဲဒီရိုးရာ ထုံးတမ်းဓလေ့ကို ကျွန်ုပ်ကတော့ ဆန့်ကျင်ရမှာပဲ...။
သူဟာ ဆုတောင်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မြင်တယ်...။
နောက်ထပ်ဘယ်လိုမှ မသွားနိုင်တော့တဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့
သူက ဆုတောင်းနေတဲ့လူကို ရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်...။
သူပြောနေတာတွေက ဘုရားတရားကို မထီမဲ့မြင်ပြုရာရောက်နေတယ်..
သင်ဟာ တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ယောက်တည်း
သင့်ထံကိုလာပီး..ကျွန်ုပ်ဟာ အရိပ်လေး တစ်ခုလိုပဲ...
သင်နှင့်အတူ ...အမြဲ နေမယ်လေ...။
ကျွန်ုပ်ဟာ သင့်ကို..ကောင်းကောင်လည်း ရေချိုးပေးမယ်..
သန်းတွေကို ရှာပီး ဖယ်ပေးပါမယ်...။
မိုးဆက်က သူ့နားကို သူပင် မယုံနိုင်ဘူး...
အသင်က ကျွန်ုပ်ဆံပင်တွေ ခန္ဓာကိုယ်တွေထဲက
ဘာကို ရှာပီး ဖယ်ပေးမယ်...
မိုးဆက်က သူ့စကားကို ရပ်ခိုင်းပြီး ပြောလိုက်တယ်...
သင့် ဆုတောင်းနည်းက ဘာဆုတောင်းနည်းလဲ...
သင်က ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ...
ဘယ်သူကို ..အသင်က ပြောနေတာလဲ...
ဘုရားသခင်ရဲ့ ဆံပင်တွေမှာ..သန်း....သန်း...တွေ ...
ဘုရားသခင်က ရေချိုးဘို့လဲ လိုအပ်တယ်..
ဒီလို တောက်တီးတောက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စကားတွေကို
မိုးဆက်က ဘုရားသခင် ခြေတော်ရင်းမှာ ခစားနေတယ်..
ကျွန်ုပ်ဟာ စာလည်း မတတ်ပါဘူး...
ဘာမှ မသိနားမလည်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ...
ကျွန်ုပ် ဘယ်လို ဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာကို ..မသိပါဘူး..
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်ုပ်ကို သင်ကြားပေးပါ...
မိုးဆက်က သူ့ကို မှန်မှန်ကန်ကန်
သူဟာ ခုတော့ သိပ်ပျော်သွားပြီ...
သူဟာ ခုတော့ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်သွားပြီလေ...
သူ့ရဲ့ အတ္တ မာနတွေကို ခုတော့ မှုတ်ထုတ်နိုင်ပြီ..
အဲဒီချိန်မှာပဲ..မိုးဆက်က အဝေးကို ထွက်သွားလေပြီကော...
၀န်ခံချက်...Talk: Osho ရေးသားသော A Spontaneous Love ဟူသော ဆောင်းပါး၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်...။ အရှင်နာဂ(ပုနေး)
Posted by yankin at 7:56 AM No comments:
လူသားတို့ရဲ့ ဘ၀ကြမ္မာသည် မနားမနေ
နားလည်မှု အမြင်မှန်သိမှု ဘ၀ကြမ္မာထဲမှာ..ရက်လုပ်နေကြတယ်...
ဖြန့်ထားတဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ စွမ်းရည်တွေ
သတ္တ၀ါတွေအားလုံးရဲ့ အစွမ်းတွေ ပါဝါတွေကိုလည်း
အမြင်မှန်သိမှုနှင့် လူသားတွေရဲ့ ထူးချွန်မှု
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်တိုင်နားလည်မှုကို ဖြန့်ပေး ဖွင့်ပေးရာမှာ...
ဒါဟာ စကြာဝဠာကြီးရဲ့ ဇာတ်လမ်းအသစ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်...။
.သောမတ်ဘယ်ရီ(Thomas Berry) ကြိုတင်မျှော်မှန်းထား မျှော်လင့်ထား
စိတ်ကူးယဉ် ဒဏ္ဍာရီဟာ ရှေးဟောင်း အခြေအမြစ် ရှိပါတယ်..။
ဘာသာတရားအားလုံးဟာ ဒီစိတ်ကူးယဉ် ဒဏ္ဍာရီရဲ့
သရုပ်ဖေါ် ပြယုဂ်ကို ..ဖုံးကွယ်ထားတယ်...
အီဂျစ်လို Zoroastrian လိုကဲ့သို့သော
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဆိုထားတဲ့ ရှေးဟောင်း ဘာသာရေးတွေမှာ..
တစ်ခါတစ်ရံ သူတို့ဟာ အချင်းချင်း
၀န်ခံချက်...Henryk Skolimowski ရေးသားသော A New Story of The Universe ဟူသော ဆောင်းပါး၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်.. အရှင်နာဂ(ပုနေး)
Posted by yankin at 7:02 AM No comments:
ဒီငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်မြူလာကတော့ တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ရော
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့်ပါ သက်ဆိုင်ပါတယ်...။
ဘေးအန္တရာယ်များပြီး အတော်ကို အရဲစွန့်တဲ့
ဆုံးရှုံးမှုတွေ နစ်နာမှုတွေ အသေအပျောက်တွေ
ငြိမ်းချမ်းရေး နည်းလမ်းကတော့ အန္တရာယ်မရှိတဲ့အပြင်
အောင်မြင်မှုအတွက်လည်း တာဝန်ခံချက် အာမခံချက်ရှိပါတယ်...။
ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်ဟာ
လက်တွေ့အားဖြင့် ထိရောက် အရေးပါရသလဲ..
အကြောင်းကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်ဟာ..
လူတွေရဲ့ အသိတရား စိတ်ဓာတ်တွေကို
ဒါ့အပြင်..လူတွေရဲ့ အသိတရား တာဝန်ယူမှု
သင့်ကို အညံ့ခံ အရှုံးပေးပါလိမ့်မည်...။
တစ်ခြားပါတီ တစ်ခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အတ္တမာနကို
တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ အတ္တမာနတွေ ပါဝင်ပတ်သက်လာတဲ့အခါ..
အကြမ်းဖက်မှုဟာ မလွဲဧကန် အကြမ်းဖက်မှုကို ပေါ်ပေါက်စေပါတယ်...။
ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံအတွက်ရော ကမ္ဘာကြီးအတွက်ပါ
ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးကိုမှ အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းက မဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါဘူး...
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်ဟာ သဘာဝတရားပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါဟာ ပြောင်းလဲ၍ မရသော ထာဝရတည်ရှိသောအရာပဲလေ..
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းကို လျှောက်လမ်းရတဲ့အတွက်
ပြည့်စုံမှုတွေ ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ သဘာဝရဲ့
တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရပါတယ်...။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ပြဿနာတွေကို မဖန်းတီးနိုင်ပါဘူး...။
စွဲစွဲမြဲမြဲ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ရှိနေလို့ပါပဲ.....။
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်ဟာ သင့်ရဲ့ အချိန်တွေ စွမ်းအားတွေကို
ဒါ့အပြင် အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ဒေါသတွေ သီးမခံနိုင်မှုတွေကိုသာ
ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အကြီးမားဆုံးသော လူမှုရေး လုပ်ငန်းကောင်းကြီးတစ်ခုပါ..
ငြိမ်းချမ်းရေး ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ...တိုးတက်ဖွံဖြိုးမှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်..
ဒါပေမဲ့...ငြိမ်းချမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်မရှိဘဲ..တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိနိုင်ပါဘူး။
လှုပ်ရှားတက်ကြွသော နေ့နဲ့ ညတွေမှာ ရှိကြတယ်..
ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ သဘာဝရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု..ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တရားဥပဒေ...
မြစ်တွေကလည်း ..ငြိမ်းချမ်းရေး သတင်းလွှာတွေ
တိုက်ခတ်နေသော လေတွေကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး သ၀ဏ်လွှာကို
၀န်ခံချက်...Maulana Wahiduddin Khan ရေးသားသော
The Power of Peace ဟူသော ဆောင်းပါး၏
Posted by yankin at 12:26 AM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အကြမ်းဖက်မှုတွေထက် ပိုပြီး
အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ၁၈၅၇.ခုနှစ်က စတင်ပြီး
အဲဒီအချိန်တုံးက ခေါင်းဆောင်တွေက လွတ်လပ်ရေုးကို
အဓိကရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကိုတော့ မရရှိခဲ့ပါဘူး...။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရေး လောကကို ၀င်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်...။
“လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မယ်..”
ဗြိတိသျ ဥပဒေကို ဆန်ကျင့်ဘို့ ဗုံးကို အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်..
ငြိမ်းချမ်းရေး ဗုံးကို အသုံးပြုမယ်လို့ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်..။
မဟ္တမဂန္ဒီရဲ့ ကြေငြာချက်ဟာ အနာဂါတ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်..။
ဗြိတိသျှ အင်ပါယာ စက်ယန္တရားကြီး တစ်ခုလုံး တုန့်ဆိုင်း ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်..
အဲဒီကြေငြာချက်ကြောင့် ဗြိတိသျှတွေဟာ အကြံအိုက်ကုန်တယ်...
ဗြိတိသျှလူမျိုးတစ်ဦးက အတွင်းဝန်ရုံးကို ကြေးနန်းစာတစ်စောင် ပို့ခဲ့ပါတယ်..
အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းဟာ သင့်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်က
ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလျှင်...
တစ်ခြားပါတီအတွက် သင့်ကို ဆန့်ကျင်ဘို့..
ဖိအားပေး အသုံးပြုဘို့ မြေနေရာ မရှိပါဘူး...။
ဒါဟာ မဟတ္တမဂန္ဒီရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ် လောဂျစ်(ယုတ္တိဗေဒ)ဖြစ်ပါတယ်...။
မကြာခင်မှာ အိန္ဒိယဟာ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့ပါတယ်...။
၀န်ခံချက်.....Maulana Wahiduddin Khan ရေးသားသော
The Power of Peace ဟူသော ဆောင်းပါး၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို
Posted by yankin at 4:21 AM No comments:
သဘောထား ကွဲလွဲမှုရှိတယ်လို့ ကျွန်ုပ် အကြံပေးတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး...။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အသိဥာဏ်တွေ ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ တကယ်ကို
အတွင်းကျကျ ရစ်ပတ်နေတယ်လို့..ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ပြောတာပါ...။
တွေးခေါ်မြှော်မြင်မှုဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ ခံစားနေတာတွေကို
အဲဒီအတွေးအခေါ်ကပဲ သေခြာအောင် ကူညီပါတယ်...
ကိုယ်ပိုင်ကျေနပ်မှု ..ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု..
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘာလဲဆိုတာကို သိတဲ့ ...
ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်...။
ကျွန်ုပ်တို့မှာ ရှိတဲ့ ခံစားချက်တွေ...
အလွန်အရေးပါတဲ့ တစ်ချို့အရာတွေကို..ကျွန်ုပ်တို့ဘ၀မှာ လိုခြင်သလောက်
ကျွန်ုပ်တို့ ရနေတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေ..
ဒါတွေအားလုံးဟာ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်...။
ဘယ်လို တက်ကြွနေအောင် လုပ်ရမယ်..
တစ်စုံတစ်ဦးကို ပျော်ရွှင်အောင် ဖျောင်းဖျပေးမယ် ..
အတွေးအခေါ် ideaအသစ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်...။
Reasoning and feeling ဟူသော ဆောင်းပါး၏
တစ်စိတ် တစ်ဒေသကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်...
Posted by yankin at 11:35 AM No comments:
န၀ရတရိ(Navaratri)ပွဲတော်ရောက်ရင် ကြည့်စရာ ပျော်ပွဲရွင်ပွဲတွေက အများကြီး...
၀တ်ကောင်းစားလှတွေ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ (Durga)အမည်ရတဲ့
လူဝင်းစားတွေရဲ့ ရုပ်ပုံအားလုံးကို အလှဆင်ပေးထားကြတယ်...
"Jai Abbae Gauri"ဆိုတဲ့ သီချင်းကလဲ..ပဲတင့်ထပ်နေတာပဲ..
ဒီပွဲတော်အတွင်းမှာ...Durga Uttsavအမည်ရတဲ့ နတ်မယ်တော်လေးရဲ့
ကိုးရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပတဲ့ ဒီပွဲတော်ရဲ အဓိကideaကတော့
shaktiရဲ့ မိန်းကလေးများရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာမှ
နတ်မိမယ် နတ်မယ်တော်လေးရဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆင်ယင်ထားတာတွေကလဲ
သူမဟာ shakti ရဲ့ တန်ခိုးပါဝါတွေကို ထင်ရှားအောင် ပြပေးတာပါပဲ..
မိန်းကလေးများ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားမှာ ပါဝင်တဲ့
ထင်ရှားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ shivaရဲ့ ကြင်ယာတော်အဖြစ်ပါပဲ...
ဒါကြောင့်မို့ ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန် ..ဒီလိုမြင်းကွင်းနှစ်ခုကို..
ယောင်္ကျားလေးရော ..မိန်းကလေးပါ ပါဝင်တဲ့ ဒီအယူအဆ ဒီသဘောထားဟာ
Shiva-shaktiတို့ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါပဲ...။
Shiva-shaktiတို့ဟာ Ardhanarishwaraတို့ကို ကိုယ်းစားပြုပါတယ်..
Shaktiရဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အမြင်နှစ်ခုကတော့ ပထမဆုံး ဖန်ဆင်းခြင်းပါပဲ..
နောက်ပီး..ကြင်နာမှုနဲ့ ..ကာကွယ်သူတွေကို ချစ်ခြင်းပါပဲ...
အဲဒီDurgaက မကောင်းဆိုးဝါး ကျွဲကြီးကို သတ်ဖြတ်နေပုံကို
၀န်ခံချက်...Sumit Dhanraj ရေးသားသော The Female Principleဟူသော
ဆောင်းပါး၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်...
Posted by yankin at 10:27 PM No comments:
တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုမှာ အပြောလေးတစ်ခုနဲ့ ထောက်ခံပြီး..
အကြောင်းတရားတွေ ဝေငှမှု ပါဝင်နေပါတယ်...
သူတို့အဆုံးမှာ ထောက်ခံထားတဲ့ အဆိုတွေ
ငြင်းခုံမှုလို့ခေါ်တဲ့ အဆုံးမှာ ပေါင်းကြည့်လိုက်ပါ...
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီဗန်းစကားနောက်ကို လိုက်နေကြတယ်...
ဒီ(manatees)နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငြင်းခုံမှုတွေဟာ..
အောက်ဖေါ်ပြပါ လမ်းစဉ်အတိုင်း ...အတိုးချုံးကြည့်ရအောင်...
(အဆိုပြုချက်) သို့မဟုတ် (သုံးသပ်ချက်)
Manateesဟာ သူတို့ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေကို နို့တိုက်ပေးတယ်...
နောက်ပီး...နို့တိုက်သတ္တ၀ါသာလျှင် ဒီလိုအရာမျိုးကို လုပ်ကြတယ်...
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒီနေရာမှာ စကားများ ရန်ဖြစ်ဘို့ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုထားတဲ့
ဒီငြင်းခုံမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခဏ နေ့စဉ်လုပ်တဲ့အတိုင်း အသုံးမပြုပါဘူး...
ဒါပေမဲ့.. ကျွန်ုပ်တို့ ဒေါသဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒီကွဲလွဲမှုမျိုးတောင်မှ
တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှု သဲလွန်စ အရိပ်အယောင်တွေ ရှိနေပါတယ်...
ကျွန်ုပ်တို့ ငြင်းခုံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှတ်ယူထားမယ် ဆိုတာကလွဲလို့
ကျွန်ုပ်ရဲ့ မိန်းမက ဒီလိုငြင်းခုံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ဘယ်လို သတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို အမှတ်ရတော့
ကျွန်ုပ်ဟာ ရှက်စိတ်တွေဖြန်းပြီး မျက်နှာကြီး နီလာတယ်...
တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်ဟာ မိန်းမနှင့် သဘောထားမတူတာတွေ
ဒီမိန်းမကို ဘယ်တော့မှ မယုံကြည်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်တွေ တစ်ခါတစ်ရံ
၀န်ခံချက်...S.Cannavo,(Ph.D)ရေးသားသော Think To Win စာအုပ်မှ
Arguments ဟူသော ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်....
Posted by yankin at 6:24 AM No comments:
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လောကဓာတ်ကြီးကို ဆုံးဖြတ်ပေးသော ကမ္ဘာဦးအစ အရည်အသွေးသုံးမျိုးကို
မက်မက်မောမော ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ခံယူထားပါတယ်...
န၀ရတရိရဲ့ အစ သုံးရက်မှာ....
“ကျွဲကြီး” လို့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပြောဆိုကြပါတယ်...
၀န်ခံချက်....Sri Sri Ravi Shankar ရေးသားသော Dip into Your Own Nature ဟူသော
ဆောင်းပါး၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်...
Posted by yankin at 12:21 PM No comments:
ကံတရားအယူအဆနှင့် လူမှုရေး အကျိုးအမြတ်ရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များ
ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ပတ်သက်နေတာတွေက မလွဲမသွေ ကြားနေရေးထက် ပိုများပါတယ်.. အဲဒီကြားနေရေးတွေက အန္တရာယ်ပိုများပါတယ်..
ကယ်တင်ခြင်းတွေ ကွန်းခိုရာတွေအတွက် အဟန့်အတား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေပါတယ်..
ဒါကြောင့် ကံတရားတွေ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း စက်ဝန်းတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်..
စစ်မှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ နှောင်ကြိုးတွေ..
နောက်ပြီး သံယောဇဉ်တွေအားလုံး ပယ်ခွါနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်..
ကြံ့လိုမျိုး တစ်ယောက်တည်း နေနိုင်ရမယ်..လှည့်လည်နိုင်ရမယ်..
ကံတရား အယူအဆ ကံတရားသဘောတရားဟာ
များပြားလှတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဘာသာရေးတွေထဲမှာ ပျံ့နှံ့နေဟန်ရှိပါတယ်...
ပရော်ဖက်ဆာ K.N ဂျယတိလက်ကေ(Prof. K.N.Jayatilleka)ပြောတဲ့အတိုင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ လက်ခံထားတဲ့ ကံတရားဟာ..ဝေဒတရားတွေ ဟိန္ဒူတွေ ဂျိန်းတွေ...
နောက်ပြီး..အာဇီဝကတွေ..သူတို့တစ်တွေ လက်ခံထားတဲ့ ကံတရားနဲ့
မတူကွဲပြားမှုရှိတယ်ဆိုတာကို နားလည်ဘို့ အဓိက လိုအပ်ပါတယ်...
ဒီလိုနားလည်မှုမရှိရင် အဲဒီမှာ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်..
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် နားလည်မှုလွဲမှားနေတာတွေဟာ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ လက်ခံထားတဲ့တရားအဖြစ် တင်ပြကြတယ်...
တစ်စုံတစ်ဦးဟာ စပီရို(Spiro)ရဲ့ အမြင်ကို လက်ခံတယ်ဆိုရင်..
အဲဒီသူဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ ကောက်ချက်ချရလိမ့်မယ်..
မြတ်စွာဘုရားရှင်က နိဗ္ဗေဒိကပရိယာယသုတ်မှာ ကံတရားနှင့် ပတ်သက်ပြီး
စေတနာသည် ကံ...ဒါကြောင့်မို့... ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လုပ်ဆောင်တဲ့ အမှုအရာတွေ
နုတ်ကလေးနဲ့ ပြောဆိုတဲ့ အပြောတွေ..
စိတ်ကလေးနဲ့ ကြံတဲ့အကြံတွေ....ဒါတွေအားလုံးကို ကံလို့ ဟောတော်မူပါတယ်...။
ကံတရားရဲ့ အမွေစား အမွေခံဖြစ်တယ်..
ဖြစ်တတ်ပျက်တတ် ပြုပြင်တတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအတိုင်း
သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးအတိုင်း..သူတို့ရဲ ကွန်းခိုရာ ခိုလှုံရာအတိုင်း
ဒီကံတရားကြောင့်ပဲ..သတ္တ၀ါတွေဟာ အနိမ့်အမြင့် တစ်နည်းအားဖြင့်
၀န်ခံချက်...Dr..Dharmasena Hettiarachchiရေးသားသော The concept of Karma and Socio-Economic Activitiesဟူသော ဆောင်းပါ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဘာသာပြန်ပါသည်... အရှင်နာဂ(ပုနေး)
Posted by yankin at 8:23 AM No comments:
ဖြေ..။EPICTETUS..ဟုတ်ပြီ..ဒါပေမဲ့.. လော့ဂျစ် ယုတ္တိဗေဒကို အသုံးမပြုပဲ
ငါ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ပထမဦးဆုံး ငါ့ကို ပြောပြပါ..
အကြောင်းတရား တွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်
အဲဒီအကြောင်းတရားဟာ ဘ၀အစမှာ ကောက်ကာငင်ကာ ဖြစ်သည်..
ဘ၀အစဆိုတာကလည်း ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရသလဲလို့..
ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် နားလည်ပေးမှု စတင်ကြိုးစားတဲ့အခါပေ့ါ..
အဲဒီနောက် စဉ်းစားဖို့ ကျွန်ုပ်တို့စွမ်းရည်တွေ
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ အခြေအနေတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ထပ်ခါထပ်ခါ
စာသင်ကျောင်းတွေမှာ အကြောင်းတရား ဆင်ခြင်မှု လမ်းကြောင်း
ဒီနေရာတွေကလည်း အစောကြီးကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့ လာခဲ့ကြပြီလေ..။
ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သတိမထားဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားကြည့်ကြစို့...
ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား အသိဥာဏ်တရားဟာ အဓိကအားဖြင့် ပုံမှန်ပဲ...
အထိုက်အလျှောက် စနစ်တကျမရှိတတ်ဘူး ..ဖြစ်ကတတ်ဆန်းပဲ..
ဒါဟာ အထူးစပါယ်ရှယ်လမ်းစဉ်ရှိမှ အောင်မြင်မယ်...။
အနိုင်ယူမည့်အစား ယုံကြည်ခံရမှု နှစ်သက်သဘောကျခံရမှုက သင့်ကို အောင်မြင်စေပါလိမ့်မည်...
၀န်ခံချက်...S. Cannavo..ရေးသားသော We all reason-but howဟူသော
Posted by yankin at 10:41 AM No comments:
God၏ တရားဥပဒေသည် အဆုံးအစမရှိသလို..မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။
တရားဥပဒေနှင့် ဘုရားသခင်သည် ခွဲခြား၍ မရနိုင်ပါဘူး..။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ God ကို မယုံဘူး
ကိုယ်ကျင့်တရားဥပဒေကိုသာ ရိုးသားစွာယုံတယ်.. ဆိုတဲ့...
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ..တကယ် သေခြာပေါက် ကွယ်ပျောက် တိမ်ကော မသွားပါဘူး...။
နိဗ္ဗာန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကြောက်စရာ စိုးရိမ်စရာလည်း မရှိသလို..
အကျင့်ပျက် ဖေါက်ပြန် ချစားမှုတွေလည်းမရှိပါဘူး...။
အဲဒီလို အကျင့်တွေအားလုံး နိဗ္ဗာန်မှာ မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်...
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ သချုင်္ိင်းကုန်း အုတ်ဂူတို့ရဲ့ အမည်းရောင်
နိဗ္ဗာန်ဟာ သက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းနယ်မြေ သက်ရှိပျော်ရွှင်ရာလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်...။
သူဟာ ကမ္ဘာမြေမှာ တွားသွားနေတဲ့ အရာအားလုံးရဲ့ ဘ၀တွေကို
သူ့ဘ၀ တန်းကြေးထားသလို အားလုံးကို တန်ကြေထားပါတယ်..သဘောထားပါတယ်...
လူသားတွေဟာ သာမန်ဖန်ဆင်းတည်ထောင် လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာ
ပြောဆိုဖို့ စိတ်ကြီးဝင်တဲ့ ယူဆချက်တွေ လက်ခံမှုတွေရှိနေပါတယ်...
အဲဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ပင်..ဘ၀ရဲ့ အကြီးအမားဆုံးအရာတွေနဲ့ ပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်..
သူတုိ့ဟာ အနိမ့်ကျဆုံး တိရိစ္ဆာန်နိုင်ငံတော်ရဲ့ အုပ်ထိမ်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်...
ပညာရှိသူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘ၀မှာ အမှန်တရားတွေနဲ့ပဲ နေထိုင်ကြပါတယ်...။
ကျွန်ုပ်ဟာ အာရှအလင်းရောင်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ကောက်နုတ်ချက်စာသားကို
၀န်ခံချက်...M K Gandhi ရေးသားသော The Way Of The Buddha ဟူသော ဆောင်းပါး၏
Posted by yankin at 8:41 AM No comments:
မေတ္တာတရားကို အခြေခံမဏ္ဍိုင်ပြုတဲ့ တော်လှန်ရေး
ကျွန်ုပ်တို့ဘ၀တွေမှာ ဘာသာတရားအပေါ် ယုံကြည်မှုရဲ့
အဓိက အရေးပါဆုံးက ဘာပါလဲ...
စိတ်လှုပ်ရှားမှုရယ်..ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ စိတ်ရယ်..ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်တဲ့ ပတ်ဝန်ကျင်း ..
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ စိတ်ခေါ်မှုများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်..။
သူတို့ဟာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖိအားတွေနဲ့ များစွာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်...။
ကလေး လူငယ် ချာတိတ်များမှာ စိတ်အားထက်သန်တက်ကြွမှုတွေနှင့်
သင်ဟာ တရားထိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ၀င်လေထွက်လေ သိမှတ်နေခြင်းဖြင့်
သင့်ရဲ့ နှလုံးသားကို ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ဖြည့်ထားပါ...။
ဒီတရားထိုင်ခြင်း ၀င်လေထွက်လေ သိမှတ်နေခြင်းဟာ
ပညာရေးတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ထွက်လာတာတွေ လျော့ခြပေးဘို့အတွက် ကူညီပေးပါတယ်...
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုဟာ ကျောင်းသားတွေအတွက် တိုးတက်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်...။
ပုံမှန်တရားထိုင်ခြင်းဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကို ရယူနိုင်ပါတယ်..။
သိပ္ပံပညာနှင့် ဘာသာရေးဟာ အတူတကွလာပါတယ်..
အားကစားသမားတွေအတွက် ဘာသာရေးထံမှ ဘယ်လိုများ အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်မလဲ...။
မင်းလို အားကစားသမားတွေအတွက် ခွန်အားတွေ အနားယူမှုတွေ
သတိတွေ ..အရမ်းကို လိုအပ်ပါတယ်...။
၀င်လေ ထွက်လေ ဒိုင်နမစ်ဟာ သင်ရဲ့ ဇီဝတွင်းဖြစ်ပျက်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်..။
သင့်ရဲ့စိတ်ကို အာရုံစိုက်လိုက်ခြင်းဟာလည်း သင့်ကို သတိတွေတိုးတက်အောင် ကူညီပါတယ်...
ဘာသာရေးယုံကြည်မှုဟာ သင့်ကို ပြောင်းလဲမှုဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်..
နောက်ပြီး..သင်ဟာ..သဘာဝတရားတွေနဲ့ စည်းချက် ရစ်သမ်ညီမျှစွာ နေထိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..။
စကားကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပြောဆိုတဲ့သူတွေကို မသိခြင်းဟာ
အခက်အခဲလို့ သိရတယ်..သူတို့ဟာ ဆန့်ကျင်ပြီး စိတ်ခံစားချက်ကို ပွင့်လင်းစွာ ဖေါ်ထုတ်ကြပါတယ်..။
တစ်စုံတစ်ဦးက ဆန့်ကျင်ဘက် ပြောလာမည်ဆိုလျှင်..
နှင်းဆီပန်းမှာ ဆူးရှိတယ်ပဲ သဘောထား နားလည်ပေးလိုက်ပါ...။
ပြဿနာတွေကို ကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်ဖို့ ခွန်အားတွေရှိရမယ်..။
ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေကို အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားပါ..။
ကျွန်ုပ်တို့မှာ ခွဲဝေထားတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာတွေ
ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုတွေ များလာလေ..
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်မှာလည်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေ ပိုပျံ့နှံလာလေပါဘဲ...။
သင်ဟာ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့သူနဲ့ သီးခံပြီး ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အခါ..
မတူကွဲပြားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဆောင်ကျဉ်းလာပါလိမ့်မယ်..။
တရားထိုင်နေတုန်း တကယ်အစစ်အမှန် ချမ်းသာကို ခံစားရပါတယ်..
အဲဒီခံစားမှုလေး အမြဲတည်နေအောင် ဘယ်လိုသေခြာအောင် လုပ်ရမလဲ...
ဆက်ပြီး တရားထိုင်ပါ...။တရားထိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွန်းအားပေးပါ...။
သစ်ပင်လေးကို အတော်ကြီးမားလာတဲ့အထိ ရေးလောင်းပေးသလိုပေါ့...။
ကျွန်ုပ်တို့ရှိသင့်တာ လုပ်သင့်တာကတော့..ကမ္ဘာအနှံ့ပညာ အသိပညာရှိရမယ်...။
ကျွန်ုဟာ ခေတ်မှီတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုကို မွန်ဂိုလီးယားမှာ တည်ထောင်ခြင်တယ်..။
မွန်ဂိုလီးယားမှာ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကနေ အသိပညာတွေ ရရှိနိုင်တယ်....။
အရှေ့နဲ့ အနောက်ရဲ့ အကောင်းဆုံ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရနိုင်ပါတယ်...။
၀န်ခံချက်...Sri Sri Rabi Shankar ရေးသားသော..Revolution Based on Loveဟူသော
Posted by yankin at 12:51 AM No comments:
အဲဒီနောက် သင်ဟာ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်ကောင်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်..
ရုပ်လွန်ပညာရဲ့ အနက်အနဲကို လေ့လာလိုက်စားကောင်း လိုက်စားမယ်...။
တစ်ချို့ထုံးတမ်းစဉ်လာဓလေ့တွေကို ငြင်းဆိုဖို့ ယုတ္တိ အကြောင်းမရှိပါဘူး..။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့..ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဲဒီရိုးရာဓလေ့ကို နားမလည်လို့ဖြစ်ပါတယ်..။
ထုံးတမ်းစဉ်လာတိုင်းဟာ အတွေးအခေါ်တွေ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ပြည့်စုံတဲ့လူတွေ တိုးမြင့်အောင်
စိတ်ဓာတ်တွေကို မြင့်မားအောင် လုပ်ပေးရပါမယ်..။
အချမနမ်(achamanam)လို့ခေါ်တဲ့ ရေသုံးစက်ကို သောက်ခြင်းဟာ
လူတွေရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို မြင့်မားအောင် လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါ..။
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ ထိတွေ့ လှုပ်ရမ်းခြင်းဟာ
ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကရော အာရုံကြောတွေကပါ...မပြီးနိုင်ပါဘူး..။
ယောဂကျင့်စဉ်လိုမျိုး ထိုင်နေခြင်းဟာ စွမ်းအားရေလျဉ်တွေ လွယ်ကူစွာ စီးဆင်းစေဖို့
ဖြူစင်မှုရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်သော ဘာသာရေးပွဲတော်အတွင်း
သစ်သီး သစ်ရွက်တွေ ပန်းတွေ လှုဒါန်းခြင်းတွေလဲ
ထိုနည်းတူပါပဲ..မိမိရဲ့ စွမ်းအားရေလျဉ်တွေ စီးဆင်းစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်....
ဘာသာရေးထုံးတမ်စဉ်လာများဟာ ငုတ်နေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိကြပါတယ်...။
၀န်ခံချက်....Murali A Raghavan ရေးသားသော Rituals As Learning Toolsဟူသော ဆောင်းပါး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဘာသာပြန်ဆိုသည် အရှင်နာဂ(ပူနေး)
Posted by yankin at 12:17 AM No comments:
တယ်လီဗီးရှင်း ရောင်းဝယ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ
ရှုပ်ထွေးပြီး သိပ္ပံနည်းကျ တယ်လီဗီရှင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်
သူက သင့်ကို ညွန်ကြားစာစောင်နှင့် remote ကို သင့်လက်ထဲမှာ ပေးပါလိမ့်မယ်...
တီဗွီ၏ ရုပ်ပုံတွေ အသံတွေ အလင်းအမှောင်တွေ ကာလာတွေကို
သင်ဟာ လုပ်နိုင် ညှိပေးနိုင်ပါတယ်...
ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး တီဗွီ ချာနယ်တွေကို ဖွင့်နိုင်ပါတယ်....။
သင့်ရဲ့ အိမ်တံခါးဝကို သိပ္ပံပညာက ယူလာပေးတဲ့ အသုံးချသိပံ္ပ အသုံးချနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်...
အထက်ပါ ဖေါ်ပြချက်ဟာ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုနှင့် ဘာသာအယူဝါဒတိုရဲ့ကြားက
ဘာသာရေးဆိုတာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြင်ပန်းဖေါ်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်..။
ဘာသာတရားအသီးသီးမှာ နောက်လိုက်နောက်ပါ တပည့်များရဲ့
သိပံ္ပပညာလိုပဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကတော့..
ပြဿနာတွေကို မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားအောင် ကူညီတယ်..
နောက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဘ၀ရဲ့ အရည်အသွေးတွေကို
သိပံ္ပပညာဟာ တစ်ခုခြင်း တစ်ခုခြင်း သဘာဝလွန် ပြဿနာတွေကို
ဘာသာအယူဝါဒတွေကတော့ ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ရှာဖွေတိုက်ခိုက်နေပါတယ်..။
ဘ၀ရဲ့ အစစ်အမှန် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့..
အစစ်အမှန်တရားတွေကို လက်ခံနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးကို မသိမှုပေါ့....။
သိပံ္ပပညာကို ကျွန်ုပ်တို့ဘ၀မှာ အသုံးချနေစဉ်...
“အဲဒီဓလေ့တွေဟာ ဘယ်လိုများ လုပ်ဆောင်သလဲ” စသည်
မေးခွန်းများ မမေးပဲ လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်...။
“ဘယ်လိုလဲ” “ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ” မေးတတ်တဲ့သူကို
အသုံးချသိပံ္ပ သို့မဟုတ် နည်းပညာတွေဟာ
အချိန်မရွေး အမြဲတမ်း တည်ဆောက်နေချိန်မှာ
ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာများနဲ့ ညွန်ကြားထားတဲ့ ဘာသာရေးတွေကို မြင်နိုင်ပါတယ်..။
ဘာသာရေးတွေဟာ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် လုပ်ထားတယ်...။
လူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးပြုဘို့အတွက်
သင်ဟာ လေ့လာဘို့ စိတ်ကညွတ်နေတယ်ဆိုရင်
သိပ္ပံပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး..အယူအဆတွေ ပုံသေးနည်းတွေကို နားလည်လာမယ်..
အရာဝတ္ထုတွေဟာ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်နေတာဆိုတာနဲ့
အမှန်တရားကို ရှာဖွေဖို့..အမှန်တရားအတွက် စွန့်စားဖို့..
သင့်မှာ အရေးကြီးတဲ့ စိတ်တွေရှိပါတယ်..
၀န်ခံချက်...Murali A Raghavan ရေးသားသော Rituals As Learning Toolsဟူသော ဆောင်းပါး၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်... အရှင်နာဂ(ပူနေး)
ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရသလား?
သင့်ဘ၀လမ်းခရီးမှာ သင်ဟာ မျက်နှာသာပေးခံရမှုတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရသလို
မျက်နှာလွဲခံရမှုတွေနဲ့လဲ တွေ့ကြုံရမှာ အသေအခြာပါဘဲ..
ပမာဏအနည်းငယ်မျှ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်..။
ကြီးမားသော အမြန်နှုံးနဲ့ လျှောက်လမ်းရမဲ့ လမ်းစဉ် သင်္ကေတကို ယူရပါတော့မယ်..။
“သူကရော..သူ့ကို ..ချစ်ဖို့ ကြိုးစားရဲ့လား”
ကျင်ကျင်နာနာ နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ မျက်နှာသာပေးခြင်းဟာ ရတနာဖြစ်ပါတယ်..။
မူမမှန်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ သူတို့ကို သူက ခဏတစ်ဖြုတ် မိုးရွာလိုက်တာလား..။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့..သူ့ကို အမြဲတမ်း ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လေ့ရှိတဲ့
အဖြေမဟုတ်သလို သူမအတွက်လည်း အဖြေမဟုတ်ပါဘူး..
သူမကို ချုပ်ခြယ်တဲ့ဆွေမျိုး ..ပြဿနာရှာတဲ့ ဆွေမျိုးတွေမရှိပါဘူး..
အလားတူပဲ..ခေါင်းမာတဲ့ ဘုရင် ဟိရန်ညာကရှိပု(Hiranyakashipu)အတွက်လည်း
အသေးအဖွဲ ပြဿနာလေးတွေကလွဲရင်..တစ်ခြား ပြဿနာမရှိပါဘူး..။
သူဟာ ဟရိ(Hari)အပေါ်မှာ ကြီးမားတဲ့သံယောဇဉ်..
ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်း မနောနဲ့ပဲ အာရုံခံကြည့်တယ်..လက်တွေမပါဘူး..။
ပြဿနာတွေ အဟန့်အတား အနှောင့်အယှက်တွေ ကျွန်ုပ်တို့
ကျွန်ုပ်တို့အား အမြန်တည်ထောင်ပေးခြင်တယ်..လို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ခြင်လဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်..။
ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းစဉ်ပေါ်မှာ ရောက်ရှိလာရင်...
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို သိတယ်..
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပျော်ရွင်မှုတွေကို အလေးအနက်ထားတယ်..ဆိုတာကို ဘုရားသခင် သိတယ်..
အခက်အခဲတွေ အဟန့်အတား အနှောင့်အယှက်တွေနှင့်
မိမိရဲ့ တည်ငြိမ်မှုသဘာဝကို ရအောင်လုပ်ပါ...။
ကောင်းကျိုးမပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို နှလုံးသားမှာ မထားပါနဲ့..။
ပျော်ရွင်မှုရော ၀မ်းနည်းကြေကွဲရမှုတွေရော ဒီနှစ်ခုလုံးဟာ
သေဆုံးပြီးတဲ့နောက် လိုက်ပါမယ့်အရာကတော့..ပင်ကိုယ် မွေးရာပါ သဘာဝပါဘဲ..။
ဒါကြောင့်မို့ သင့်ရဲ့ သဘာဝတရားတွေ..တိုးတက်နေအောင် အမြဲတမ်းကြိုးစားပါ..။
ဗဟုသုတ နေမင်းကြီးဟာ သင့်ဘ၀မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းမှာ ပေါ်ထွန်းနေပါတယ်..
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သံသယအမှောင်ထဲမှာ ခြေဦးတည်ရာကိုသွားနေတဲ့
ဒီမကောင်းဆိုးဝါးဆိုးစိတ်(မကောင်းတဲ့စိတ်)ဟာ အမှန်တရားတွေကို ဖျက်ဆီးတယ်..။
လောဘ ဒေါသနဲ့တူတဲ့ ဒီရောဂါ ဝေဒနာတွေဟာလည်း ကွယ်ပျောက်ပါလိမ့်မယ်..
သင့်ဘ၀လမ်းဟာ အပြည့်အ၀ အလင်းရောင် ရှိပါတယ်..
၀န်ခံချက်...Asaram Bapuရေးသားသော Facing Problems? Goodဟူသော
ဆောင်းပါး၏ တစ်စိတ် တစ်ဒေသကို ဘာသာပြန်ပါသည်..
Posted by yankin at 2:21 AM No comments:
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လူတွေကို ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် တုန်ပြန်မိသောအခါ
ခန္ဓ္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်း ဆန့်ကျင်ဘက် ဦးတည်ရာကို လှုပ်ရှားမိပါတယ်..
အာရုံကြောတွေ ကိုယ်ခံအားတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေပါတယ်..
ဒါကြောင့်မို့ ဘ၀မှာ ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေအားလုံးကို
နောက်ပြီးဆန့်ကျင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်
အပြုသဘောဆောင် အကောင်းမြင်မှုတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို
လူနာနဲ့ ၀မ်းကွဲညီကိုတော်သူကို စည်းရုံးပြောဆိုတယ်..
ထို့နောက် ဟာသရုပ်ရှင်းကား အစစ်အမှန်တွေကို ငှားပြီး
ပြင်းထန်စွာ နာကျင်မှုတွေဟာလည်း လျော့ကျသွားတယ်..
နောက်ဆုံးတော့ သူဟာ ပြန်လည် နေကောင်းလာပါတယ်..လို့
ဗြိတိသျ ဆေးဂျာနယ်မှာ သူ့အတွေ့အကြုံကို ရေးသားထားပါတယ်..။
အာတ် မတ်သီးယတ် (Art Mathias)ဟာ အမျှင်လေးတွေအပါအ၀င်
သူဟာ ၀ါနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ချည်ထည်လေးတွေကို ၀တ်ဆင်တယ်..
ဒါကိုသိတော့ ဆရာဝန်ဟာ သူ့ကို စွန့်ခွါသွားတယ်...။
တစ်နေ့မှာ သူဟာ ခွင့်လွတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး နားထောင်ရတယ်..
သူ့ကို နာကျင်အောင် လုပ်တဲ့သူတွေကို ခွင့်လွတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်..။
အဲဒီနောက်မှာတော့ သူဟာ မတည့်တဲ့အစားအစာတွေအပါအ၀င်
အစားအစာ အတော်များများကို စားနိုင်လာတယ်..
အသားအရေတွေဟာလည်း ကောင်းလာတယ်..ဆိုတာကို ရုတ်တရက် သိလိုက်တယ်..။
ဒီလိုအံ့သြရလောက်အောင် အနာရောဂါတွေ ပျောက်ကင်းခြင်းနောက်ကွယ်မှာ
သူ့အတွေးအခေါ်တွေ အဓိက ပြောင်းလဲလိုက်တာလည်းပါတယ်..
သူ့ကို နာကျင်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကို ခွင့်လွတ်တယ်..
ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့ မတ်သီးယက်တို့အတွက် ကျန်းမာရေးတွေ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာတာ..
နာကျင်မှုတွေ ပျောက်သွားရတာဟာ သဘောထား ပြောင်းလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်...။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကလည်း ၂၀၀၂ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်..
ဆရာဝန်နှင့် လာတိုင်ပင်သော လူနာသုံးယောက်တွင် တစ်ယောက်သည်
ဒေါသတွေ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုတွေ စိတ်အားငယ်မှုတွေကြောင့်
စိတ်မကျေနပ်မှုတွေ စိတ်ပျက်အားငယ်မှုတွေနဲ့ ဆင်းရဲနေပါတယ်..။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သဘောထားတွေကို ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဖေါက်ပြန်မှုတွေကို ရှောင်ကြည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..။
စိတ်ပျက်ခြင်း စိတ်ထိခိုက်ခြင်းတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အပြုသဘောလမ်းစဉ်တွေကို လေ့လာရပါမယ်..။
သမတကြီး အေဘရာဟင်လင်ကွန်းက သူ့သားရဲ့ ဆရာထံကို
“ဒါပေမဲ့..ကျရှုံးမှုတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကိုလဲ သင်ပေးပါ”
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအကုန်မသိနိုင်ပါဘူး..
ဒါပေမဲ့ မကြာသေးခင်က လေ့လာမှုအရ..
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် ဘုရားသခင်က အဲဒီဦးနှောက်ကို ဖန်ဆင်းပေးပါတယ်..။
မျှော်လင့်ချက်တွေ ယုံကြည့်မှုတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စွမ်းအားတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးပါလိမ့်မည်....။
၀န်ခံချက်..Rev K Vaudevan ရေးသားသော Neurons, Love, Attitude ဟူသော ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်... အရှင်နာဂ(ပူနေး)
Posted by yankin at 3:02 AM No comments:
သင်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း အနောက်တိုင်းကမ္ဘာရဲ့ ယုံကြည်မှုနှင့်
ဒုက္ခ၏ အကြီးမားဆုံးသော အရင်းအမြစ်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူဖြစ်ခြင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
ကမ္ဘာကြီးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကွဲပြားနေပါတယ်...
ဆင်းရဲခြင်းတရားဟာ ရေနစ်နေသူကို လည်ပင်းညှစ်သတ်နေသလိုမျိုး
နိုးကြားနေအောင် သတိရှိအောင် လုပ်နေရပါမယ်..
ပြောင်းလဲခြင်းတရားကဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ကို စတင်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်..
ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကလဲ စစ်မှန်သော မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို
တစ်ဦးခြင်းအဓိကကျမှုနှင့် တစ်ဦးခြင်း အလိုဆန္ဒတွေဟာ
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လူတွေကို သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက် ဘယ်လိုငြင်းမလဲ..
နောက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မရေမတွက်နိုင်သော လိုခြင်မှုတွေကို ဘယ်လို လွန်မြောက်အောင်
လုပ်ပေးနိုင်မလဲ..ဆိုပြီး မစ္စတာ တင်မာမန်က မေးခွန်းနှစ်ခုထုတ်ပါတယ်..။
ဒါဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော လက်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာမြင်ကွင်းရဲ့
ဒါဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်တွေ..လုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက် သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ အခြေခံပဲဖြစ်ပါတယ်...
ဒီနေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက် ပထ၀ီနိုင်ငံရေးပညာနှင့်ပတ်သက်တွေ လုပ်ဆောင်မှုတွေ..
လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေ ဖယ်ရှားနေတယ်လို့ ပြောဆိုနေတာကို မစ္စတာတင်မာမန်က ငြင်းဆိုသွားပါတယ်..
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ ရန်လိုတတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလဲ နောက်ဆုတ်ပေးပါတယ်..
တရားထိုင်ခြင်းအလုပ်ဟာ အကြမ်းမဖက်တဲ့ အတွေးအခေါ်ပဲဖြစ်ပါတယ်..
ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားက ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆု လက်ခံပွဲမှာ ပြောသွားတာကတော့...
“ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပထ၀ီတစ်ခုတည်းကို တိုးတက်အောင် လုပ်ရုံသာမကဘူး..
တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ တာဝန်တွေကို တိုးတက်အောင်ရမယ်”
“ဂြိုဟ်တွေ နက္ခတ်တာရာတွေ ဖြေရှင်းပေးတဲ့ မတူညီတဲ့
လူအဖွဲ့အစည်းမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းမှု ရှိလာမှာပါ”
အဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးတွေကို အိမ်နီးနားခြင်း အဖွဲ့အစည်းတွေ
အိမ်နီးနားခြင်း နိုင်ငံတွေ စသည်ကို ခွဲဝေပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်”လို့
ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားက ပြောဆိုသွားပါတယ်...
၀န်ခံချက်...Martine Batchelor and Kerry Brown ရေးသားသော
Buddhism and Ecologyဟူသော ဆောင်းပါးကို
Posted by yankin at 11:08 PM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် တရားတော်သည် အလေးထားအပ်သော ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒီဥပဒေဆိုတာ အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာနှင့် မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဖြစ်ပါတယ်..
အနှစ်သာရအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဂေဟဗေဒနှင့်ဆက်နွယ်သော ဘာသာရေး
သို့မဟုတ် ဘာသာရေး ဂေဟဗေဒလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်..။
အားလုံးပေါ်မှာ မေတ္တာတရား ကရုဏာတရား လေးစားမှု ထားရှိခြင်းတွေဟာ
အနောက်နိုင်ငံ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်..
မကြာသေးသော ရာစုနှစ်ကာလများမှာ လူသားတွေကို ကန့်သတ်လာကြတယ်..
ကံတရားဥပဒေကြောင့် တစ်နေရာစီမှာ ဖြစ်လာကြတယ်..
ရှောင်လွဲမရတဲ့ အာဏာ ပါဝါတွေ ရလာကြတယ်..
ကံတရားဥပဒေမှာ စိတ်ကို ပထမဆုံး အကြောင်းတရားအဖြစ် နေရာထားပါတယ်..။
ဒီစိတ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်အရေးအရာကိစ္စတွေ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ဘ၀ကြမ္မာတွေ ပုံသဏ္ဍာန်တွေကို
မွေးဖွားခြင်းတွေ တည်ရှိခြင်းတွေဟာ အကြောင်းတရားအပေါ်မှာ တည်ရှိပါတယ်...။
အဲဒီအကြောင်းတရားတွေကဘဲ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကမ္ဘာကြီးကို ဆက်သွယ်ပေးတယ်..
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသော ဖြစ်တည်မှုတွေကို ငြင်းဆိုခွင့်ပေးတယ်..။
ကမ္ဘာကြီးနှင့် ကျွနုပ်တို့ကြားက နယ်နိမိတ်တွေဟာ
သဘာဝတရားအားလုံးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ခွဲခြားမရနိုင်သလို
တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ရစ်ပတ်ယှက်နွယ်နေကြပါတယ်..။
တစ်ခြားသူတွေအပေါ်မှာ မေတ္တာတရား ကရုဏာတရားတွေ ထားရှိရမှာဖြစ်သလို
ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်း တစ်ခြားသူတွေက မေတ္တာတရား ကရုဏာတရား ထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်..
၀န်ခံချက်..Martine Batchelor and Kerry Brown ရေးသားသော Buddhism and Ecologyဟူသော ဆောင်းပါး တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်..
Posted by yankin at 1:55 AM No comments:
Remenbrance, To my Devotee, Daw Kyin Shwe
it is one month today My Devotee Daw Kyin Shwe left all of us .
She wasawoman of great compassion,aphilanthropist,avisionary and
devout who genuinely cared for the poor and needy.
Despite the great success she enjoyed in business life.
She remained to the endasimple, courteous and humble person.
in particular, she worked selflessly for the benefit of the community.
she was extraordinarily generous in helping the poor and
institutions connected with women, children, education and health,
from the various charities she set up.
She ledafull life which was rich, eventful and fruitful.
She was approachable, affable, and fond of people.
She wasaregular at community and social events and
unassumingly would greet one and all.
I, monk from university of pune, offer my condolences to the entire Daw Kyin Shwe family and
salute the greatness of the simple woman who will be missed by all of us.
We shall always cherish the happy memories and moments with her.
တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂလိက ဘ၀သည် သမုဒ္ဒရာထဲ မျှောနေသော ရေခဲတောင်နှင့်တူ၏..။
ဒါမှမဟုတ် သမုဒ္ဒရာထဲ မျောနေသော သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းလေးနှင့်တူပါ၏..။
ကျွန်ုပ်တို့မှာ အနှောင့်အယှက်တွေ ပေါ်လာတယ်..
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နေ့စဉ်လူနေမှုဘ၀မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အရေးမပါတဲ့ အသေးအဖွဲကိစ္စတွေ..
မျက်စိနဲ့ မြင်နိုင်တဲ့ အသေးအဖွဲလေးတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲ
ပျော်ရွှင်မှုတွေ နာကြင်မှုတွေ..အောင်မြင်မှုတွေ ..ကျရှုံးမှုတွေ
ဒါတွေက ကျနော်တို့ကို..အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိကြပါတယ်..
ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့ဟာ ကြီးမားတဲ့ အကြံအစည်တွေကို အကောင်အထည် ဖေါ်ရာမှာ
အရေးမပါတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖယ်ထုတ်ပစ်ထားရမယ်..။
ကျနော်တို့ဟာ တစ်ခဏ ပျော်ကြရတယ်..
နောက်တစ်ကြိမ် စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ပြီး ၀မ်းနည်းကြရတယ်..
မွေးဖွားခြင်းတွေ သေဆုံးခြင်းတွေကို မေ့နေကြတယ်..။
မွေးဖွားခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းကြားမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံအားလုံးဟာ..
ဘ၀ဆိုတာ မြင့်မားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ရှိနေကြရပါမည်..။
အနက်ရှိုင်းဆုံး နှလုံးသားထဲမှာ မွေးဖွားခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်း စက်ဝန်းက
လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ နေရာကို ရောက်ရှိနိုင်ဘို့ လွမ်းမောတမ်းတနေကြတယ်...။
စစ်မှန်သော ပျော်ရွှင်မှုတွေသည် လွတ်လပ်စွာ သိမြင်လာခြင်းမှ
..ကျွန်ုပ်တို့ကြားက သဘောထားကွာဟချက်တွေ တံတားခင်းပေးဘို့ဆိုတာ
ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာမို့ မတူညီတဲ့ ကမ္ဘာနှစ်ခုမှာ နေထိုင်နေရပါတယ်..။
ပြင်ပကမ္ဘာမှာ နေထိုင်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်တွေကို မေ့နေကြပါတယ်..။
အတွင်းကမ္ဘာလေးထဲ နေထိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း လောကထဲက အရေးထားရမဲ့အရာတွေ
ပူပန်ရမဲ့ အရာတွေနဲ့ဘဲ အာရုံတွေ ထွေပြားနေကြပါတယ်...။
အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းဆိုတာ မိမိအတွင်းစိတ်ပါဘဲ...
အတွင်းစိတ်လေး ကျရှုံးမှုဟာ..အထီးကျန်ခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ စိမ်းကားစေခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်..။
ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နာကျင်မှု.. ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျမှုရဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
၀န်ခံချက်..Rajmani Tigunait ရေးသားသော The Royal Path ဟူသော ဆောင်းပါး၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည် အရှင်နာဂ(ပုနေး)
Posted by yankin at 4:23 AM No comments:
သူ့အမည်က ဇိုမို..လူတော့မဟုတ်ဘူး ယုန်ကလေးပါ..သူက ခန္ဓာကိုယ်လဲ မကြီးဘူး..
ကျွမ်းကျင်တယ်လို့တော့ နာမည်ကြီးတယ်..။သူ့ကိုယ်သူလဲ ပညာရှိတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်..
တစ်ချိန် ဇိုမိုလေးဟာ ကောင်းကင်က ဘုရားသခင်ထံသွားဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်..
"ပင်လယ်ထဲက ငါးအကြီးကြီးရဲ့ အကြေးခွံရယ်..
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ နွားရိုင်းမကြီးရဲ့ နို့ရယ်...
ခွန်အားသန်တဲ့ ကျားသစ်ရဲ့ ..သွားတွေရယ် အဲဒါတွေကို ငါ့ထံ ယူပြလေ.."
"အဲလို..ယူပြနိုင်ရင်..ထိုက်ထိုက်တန်တန်..သင့်ကို ဆုချမယ်.."ဟု ပြောလေသည်...။
ယုန်ကလေး ဇိုမိုက ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့..သဘောတူ လက်ခံလိုက်တယ်...။
အဲဒီနောက် ယုန်ကလေးဟာ ကမ်းခြေမှာ စည်ကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် တီးလိုက်တယ်...။
စည်တီးသံဟာ ပင်လယ်ကမ်းခြေကနေ ကြားရသတဲ့..
ပင်လယ်ပြင်ထဲက ငါးကြီးဟာ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ စည်သံကို ကြားတာနဲ့ က တယ်..။..ကျွမ်းထိုးတယ်..
ယုန်ကလေး ဇိုမိုဟာ စည်ကို မြန်သထက် မြန်အောင် တီးတယ်..
ငါးကြီးဟာ က တာ မြန်လွန်းတဲ့အတွက် ကြေးခွံတွေဟာ တချွင်ချွင်နဲ့ ကျွတ်ကျကုန်တယ်..။ အတန်ကြာတော့..ငါးကြီးဟာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်ပြီ..
ပင်လယ်ပြင်ထဲ နောက်ပြန်ခုန်ပြီး ပျောက်ကွယ်သွားပါလေရော...
ယုန်ကလေး ဇိုမိုဟာ ငါးအကြေးခွံတွေကို ဆွဲယူပြီး ပြေးထွက် လာခဲ့တယ်..
တောထဲပြန်ရောက်တဲ့အခါ ယုန်ကလေးဇိုမိုဟာ ကြောက်စရာ နွားရိုင်းကြီး မြင်အောင်..
အုန်းပင်ပေါ် ရောက်တဲ့အခါ နွားရိုင်းကြီးကို စိတ်ဆိုးအောင် ဆွပေးတယ်..
"အားသန်တယ်ဆိုတာက ..ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား"
နွားရိုင်းမကြီး စိတ်တွေတိုပြီး အုန်းပင်ကိုတိုက်လေတော့ ဦးချိုဟာ အုန်းပင်မှာ စိုက်ဝင်နေလေရော...
အဲဒီအခါကျမှ ယုန်ကလေး ဇိုမိုဟာ အောက်ကိုဆင်းလာပြီး..
သူရဲ့ စည်ကို ထက်အောက်လှန်ပြီး. နွားနို့တွေကို ညှစ်ထည့်တယ်..။
နွားမကြီး အုန်းပင်ကနေ လွတ်မထွက်သွားခင်ပေါ့..။
နောက်တစ်ခါ ယုန်ကလေး ဇိုမိုဟာ တောင်ထိပ်ကို တက်ပြေးပြန်လေရော..
အဲဒီမှာ အားသန်တဲ့ ကျားသစ်နေထိုင်တယ်လေ..။
လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ငါးအကြေးခွံတွေနဲ့ နွားနို့စက် အနည်းငယ် ဖြန်းထားခဲ့ပြီး..
အသားနံ့နဲ့ နွားနို့နံ့ရလို့ ...ကျားသစ်ဟာ တောင်ပေါ်ကနေ ခြေလှမ်းကျဲကျဲနဲ့ ဆင်းလာခဲ့ပြီး..
ကျောက်တုံးတွေ ကျောက်ဆောင်တွေကို တိုက်ခိုက်သတဲ့..
ယုန်ကလေးဇိုမိုဟာ သွားတွေကို ကောက်ယူပြီး...ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ ဘုရားသခင်ထံကို
ဘုရားသခင်က ယုန်ကလေးကို ပြုံးပြီး..
"မင်း သိပ်တော်တယ်....မင်း သိပ်တော်တယ်"
"ဒါပေမဲ့ မင်း ..ပညာမရှိဘူး..ဦးနှောက်မရှိဘူး"
လောကကြီးမှာ တန်ကြေးရှိတဲ့ အရာသုံးမျိုးရှိတယ်..
"အိုယုံကလေး..""သင်ဟာ ..သတ္တိလည်း ရှိတယ်..""ခံစားမှုလည်းရှိတယ်"
"ဒါပေမဲ့ သင့်မှာ လုံးဝ နားလည်မှု မရှိဘူး"..
"ဒါကြောင့်မို့ သင်ဟာ နောက်တစ်ကြိမ် ငါးတွေ နွားတွေ ကျားသစ်တွေမြင်ရင်..
အမောင်..ယုံကလေး ..အမြန်ပြေးတာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်" ဟု
ဘုရားသခင်က ယုံကလေးကို ပြောလေသည်...။
လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုဟာ ခဏတစ်ဖြုတ်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးရလို့ စိတ်ကျေနပ်စရာပါ..
ပညာဥာဏ်ကတော့ ကျယ်ပြန်တဲ့ရှုထောင့်တွေကနေ လုပ်ဆောင်တယ်..
ပညာဥာဏ်ဆိုတာ မာနကြီးမှု စိတ်ကြီးဝင်မှုတွေပေါ်မှာ မတွေ့ရပါဘူး..
.ယုံကြည်မှုပေါ်မှာသာ ပညာဥာဏ်ကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်..
ပညာဥာဏ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေ အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကို လမ်းဖွင့်ပေးပါတယ်..
လိမ်မာကျွမ်းကျင်မှုက ကျွန်ုပ်တို့ကို စွမ်းအားတွေနဲ့ ပြည့်ဝစေအောင် လုပ်ပေးပါတယ်..
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ နည်းပညာတွေနဲ့ ရှေ့သိုတက်နေရမယ်..
အဖွဲ့အစည်းတွေ မြို့တွေ နိုင်ငံတွေ တည်ထောင်နိုင်ရမယ်..
ဒီပုံပြင်လေးက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာပြောလဲဆိုတော့..သူဟာ ပညာရှိသူပါ..
ဒါပေမဲ့ ရူးနှမ်းနှမ်း ပေါကြောင်ကြောင် အလုပ်တွေကို လုပ်တယ်..လို့ဆိုပါတယ်..
ပညာဥာဏ်ဆိုတာ အတွေးအခေါ် သက်သက်မဟုတ်ပါဘူး..
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တန်ဘိုးတွေ..ကျွနုပ်တို့ရဲ့ ဦးစားပေးကိစ္စတွေကို
ကျဆုံးမှုရှိပေမဲ့ ..အဲဒီအမှားထဲကနေ ပြန်လည် လေ့လာရမယ်..
ကျွနုပ်တို့လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အကျိုးတွေ
မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေအတွက် ကျွနုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဘဲ တာဝန်ယူနိုင်ရပါမယ်..။
လိမ်မာကျွမ်းကျင်မှုကို ပညာဥာဏ်တွေ ဗဟုသုတတွေ
ပညာဥာဏ်ဆိုတာ အမှန်တရားကိုဘဲ ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေ ကြည့်ပြီး လက်ခံတယ်...
၀န်ခံချက်..Marguerite Theophil ရေးသားသော Cleverness And Wisdom ဟူသော ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်...အရှင်နာဂ(ပုနေး)
သင့်ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတို့အိုင်ပေါ့တို့ ရေထဲလွတ်ကျသွားလျှင်
သင့်ရဲ့ ဈေးကြီးတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ အိုင်ပေ့ါတွေ မိုးရေတွေ စိုသွားလျှင်..
ဒါမှမဟုတ်..နံရံကပ် လက်ဆေးကန်ထဲ သင်လွတ်ကျသွားလို့ ရေစိုသွားလျှင်..
သင်လုပ်ရမဲ့ နောက်တစ်ဆင့် ခြေလှမ်းက ဘာပါလဲ...
တစ်ခါက အဒမ်ကာရီဟာ သူရဲ့ အိုင်ဖုန်း အိမ်သာထဲမှာ လွတ်ကျသွားပါတယ်..
အလားတူပါဘဲ လီယိုလာပေါ့လည်း သူရဲ့ဆဲဖုန်းကို
သူရဲ့ဘောင်းဘီနဲ့ ကိုကာကိုလာပုလင်း တိုက်မိလို့ ပုလင်းလဲကျသွားသောအခါ
သူရဲ့အိုင်ပေါ့ထဲကို ရေတွေက စိမ့်ဝင်သွားပါတယ်..
အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း အတော်များများဟာ ရေကြောင့်ပျက်စီးသွားတာမျိုးကို ..
ပထမဆုံး ပါဝါကို ပိတ်လိုက်ပါ..
ထမင်းဇလုံ ပန်းကန်လုံးထဲမှာ ဖုံးထားပါ..
သဘာဝအတိုင်း ချောက်နေတဲ့ ထမင်းတွေက ပိုနေတဲ့
အနည်းဆုံး နှစ်ဆယ့်လေးနာရီကြာအောင် လုပ်ပေးပါ..
ဘက်ထရီကို နုတ်ယူပြီး အမြန်ဆုံး ချောက်အောင် လုပ်ပါ..
အစားထိုးဖို့အတွက် ဈေးဆိုင်ကြီးတွေဆီကို မသွားခင် အိမ်မှာ ပြင်လိုက်တော့ အကုန်အကျသက်သာပြီး..တန်ကြေးရှိလှပါတယ်..
၀န်ခံချက်..FWDမေးလ်မှ ရသောWhat If You Droppod ur mobile phone in water? ဟူသော ဆောင်းပါးကို သင့်လျှော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုသည်
Posted by yankin at 9:06 AM No comments:
အားလုံးအဆင်ပြေရင် ရှက်ကီရာက ကာလီ(နတ်သမီးစစ်သည်တော်)
အမည်ရတဲ့ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်..။
ကရန်အရိုရာကဘဲ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ထုပ်လုပ်ဖြန့်ချီပါမည်..။
ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ 3Dရုပ်ရှင်ကား ဖြစ်ပါတယ်..။
နှစ်နာရီကြာမြင့်အောင် ကြည့်ရမဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီ..
လန်ဒန် ဒါမှမဟုတ် ယူရိုအရှေ့ပိုင်းက မြို့တစ်မြို့မှာ ရိုက်ကူးပါလိမ့်မယ်..
ဒီအစီအစဉ်မှာ ရှက်ကီရာ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်မှာ သေခြာတဲ့အကြောင်းကို
အရိုရာက Mirrorကို ခုလို ပြောပြပါတယ်..
"သူမက မူအားဖြင့် သဘောတူပြီးပါပြီ"
"ငွေကြေးကို မြန်မြန် ဖြေရှင်းရမယ်"ဟု
High Ground Entertainment Ltd၏ CEO အရိုရာက ပြောပြပါတယ်..
ဘာကြောင့် အိန္ဒိယရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေကို ကာလီဇာတ်ကားမှာ
သရုပ်ဆောင်အဖြစ် မရွေးသလဲလို့ မေးတဲ့အခါ..
"ကျနော်တို့က အသားမဲတဲ့သူတွေကို လိုခြင်တယ်"
"နောက်ပြီး အင်တာနေရှင်နယ် စတားတစ်ယောက်ကိုလဲ လိုခြင်လို့ပေါ့" ဟု
အရိုရာဆိုတာ အင်ဒို ယူကေ စီမံကိန်းကြီးရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်..။
Posted by yankin at 5:15 AM No comments:
အိန္ဒိယမြူးဇစ်များသည် အတွေးအခေါ်ကြွယ်ဝမှု တီးလုံးတွေ
တေးသားတွေ သာယာငြိမ်ညောင်းနာပျော်ဖွယ်ရှိမှု စည်းချက်မှန်ကန်တို့ကြောင့်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှာဖွေသူတွေ..အနာဂါတ်ကို ကြိုတင်ဟောပြောသူတွေရဲ့
တင်ပြပုံကောင်းမွန်မှုကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ချီးမွမ်းအခံရသည်..။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးမှုတွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန့်ကျင်ဘက်နယ်ပယ်မှာ
ကျော်လွန်ပြီး စိတ်ကို ဦးဆောင်မှုဖြစ်စေပါတယ်..။
မြုံနေသော ဖန်းတီးနိုင်စွမ်း အစေ့တွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့မှာ တည်ရှိနေပါတယ်..။
အိန္ဒိယရိုးရာ သီးချင်းများဟာ မရေမတွက်နိုင်သော လျို့ဝှက်နက်နဲသော အတွင်းစိတ်ကနေပြီး..စတင်ပေါ်ထွက်လာကတည်းက သီချင်းတွေဟာ နားထောင်လို့အလွန်ပင်ကောင်းပါတယ်...။
သူဖန်တီးတဲ့ အနုပညာစမ်းချောင်းထဲမှာ စီးမြောရင်း..အနှောင့်အယှက်ပေါ်လာတယ်..
နောက်ဆုံးတော့ အမြင့်မြတ်ဆုံး..ဥာဏ်မမှီနိုင်သော စိတ်တွေနဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ သမုဒ္ဒရာထဲဆီ..
အတွေးအခေါ်တွေ ဘာသာစကားတွေ အသံတွေ ရစ်သမ်တွေ
နှလုံးသားရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်အတိုင်း ၀တ္တုစတိုင်နဲ့ သီချင်းတွေကို ရေးဖွဲ့ပါတယ်..။
တစ်မူထူးခြားသော အရည်အသွေးတွေ ကမ္ဘာအနှံ့က စာသားတွေနဲ့ သီချင်းတွေကို ဝေေ၀ဆာဆာ ရေးဖွဲ့ပါတယ်..
ပရာဘာတဆမ်ဂီတ အမည်ရတဲ့ သီချင်းရေးဆရာကလဲ
တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ အစဉ်အလာအတိုင်း အများမိုးခါရေသောက်သလို
သူလဲ ဘီးနင်းထားတဲ့ချိုင့်ထဲမှာ ဆက်လက်လျှောက်လမ်းပါတယ်..။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူလဲ...နံနက်ခင်းမိုးသောက် အရုဏ်တက်စတဲ့ အစဉ်အလာတွေကိုဘဲ
လက်ရှိအချိန်ကတော့ ကျနော်တို့အတွက် အလွန်နက်နက်ခက်ခဲသော
ဘေးကြပ်နံကြပ် ချောက်ကမ်းပါးကြီးဆီ ရောက်ရှိလို့နေပါပြီ...
မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် များပြားသော ပြဿနာတွေကို
ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီးနောက် လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လမ်းစဉ်တွေကို ပျောက်ဆုံးကုန်ကြတယ်..အကျင့်စာရိတ္တတွေလဲ ပျက်စီးကုန်ကြတယ်..။
"လူတိုင်း လူတိုင်း အကောင်းမြင်ဝါဒ ရှိသင့်ပါတယ်.."
"ကျနော်လဲ ခင်ဗျားတို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုတယ်.."
"အားလုံး ပြည့်ဝဘို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့သူတိုင်း သူရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဘို့ သေခြာပါတယ်.."လို့...သီချင်းရေးဆရာတစ်ယောက်က သူ့သားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုသွားပါတယ်
မျှော်လင့်ချက်ကုန်ဆုံးနေသူတွေ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားနေတဲ့ ဖျားနာသူတွေဟာ
သူတိုရဲ့ အမြင့်ဆုံး မျှော်လင့်ချက်တွေ ရရှိဘို့ ..
မျက်ရည်တွေ အပြုံးတွေနဲ့ ပြည့်လျှံနေတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးဆီ ယူလာဘို့အတွက်
ကောင်းကင်ဘုံက လာတဲ့ မြူးဇစ်မြစ်ထဲမှာ..ကခုန်သီဆိုသင့်တယ်လို့...
အာနန္ဒမာဂအဖွဲ့ကြီးကို တည်ထောင်သူ သျှရီ အာနန္ဒမုတ္တိက ဆိုသွားပါတယ်..
လူတိုင်းလူတိုင်း အားလုံးနဲ့ အသည်းနှလုံးထဲကနေ ဆက်ဆံနေရတဲ့အတွက်
သံသယဆိုတဲ့ မဲမှောင်နေတဲ့ တိမ်တွေနဲ့ ယုံကြည်မှု နေရောင်တွေကို
ဒါဟာ ငါ့အတွက် လမ်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီး
ဒီလိုမေးခွန်းအတွက် အဖြေကတော့ ပရာဘာတစမ်ဂိတအမည်ရတဲ့
၀န်ခံချက်..Acharya Nityasatyananda ရေးသားသော Musis of Optimism ဟူသော ဆောင်းပါးတစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဘာသာပြန်ပါသည်.... အရှင်နာဂ(ပုနေး)
Posted by yankin at 9:22 AM No comments:
သတင်းစာကို ဖတ်တိုင်း စိတ်တင်းကြပ်မှုတွေ စိတ်လက်မသက်မသာဖြစ်ရမှုတွေ ကြုံရတယ်..
ဒီနေ့တော့ သတင်းတစ်ခု ဖတ်လိုက်ရလို့..စိတ်လက်ပေါ့ပါးတယ်..
ကိုယ်တိုင်လဲ မျက်စိက မကြာမကြာအောင့်နေတော့ ..
မျက်စိနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိခြင်နေတယ်..
မျိုးရိုးဗီဇကို ရှာဖွေတွေရှိပြီလို့ ကမ္ဘာကြီးကို ကြေငြာလိုက်ပြန်တယ်..
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ မျက်စိနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကစဉ်ကလျားဖြစ်နေတာတွေအတွက်
ကုသဘို့ လမ်းစတွေ့ပြန်ပြီလို့ ဆိုပြန်တော့ စစ်ပွဲသတင်းတွေ တစ်ခြားလူမှုရေး ပြဿနာတွေ ဖတ်နေရတာထက်စာရင်..ဒီသတင်းလေးက ရင်ကို ကြည်နူးစေတယ်..လေ..သတင်းအပြည့်အစုံ သိခြင်ရင်တော့ ဒီမှာ နှိပ်ကြည့်လိုက်လေ
Posted by yankin at 6:53 AM No comments:
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက် stay visa ထပ်တိုးဖို့ ရုံးကိုသွားရတယ်.. အဖေါ်အဖြစ် လိုက်သွားရတယ်လေ..။သိတဲ့အတိုင်း ကုလားတွေဆိုတော့ စည်းကမ်းက
ခဏခဏ ပြောင်းတယ်..ရုံးကအပြန် အခန်းမှာ ခဏ အနားယူပြီး ရေမိုးချိုးလိုက်တယ်..
နောက်ပြီး အိန္ဒိယတိုင်းသတင်းစာ ဖတ်ကြည့်မိတယ်..
သတင်း တစ်နေရာမှာ ရစ်ရှောဒရိုင်ဘာ(သုံးဘီးမောင်းသူ)တစ်ယောက်က
ဆယ်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ် တစ်ယောက်ကို သွေးဆောင်ဖြားယောင်းခေါ်ယူသွားပြီး လည်ပင်းညှစ်သတ်လိုက်တဲ့ သတင်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်..
မသတ်ခင် ကလေးအဖေကို ဖုန်းခေါ်ပြီး..ရူပီးငွေနှစ်သိန်းနဲ့ ကလေးကို ပြန်လည်ရွေးဘို့ပြောတယ်..ကလေးဖခင်လဲ မပေးတော့..သူသားလေး အသတ်ခံလိုက်ရတယ်..
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကူးမိတယ်..လူတွေ ဆင်းရဲတိုင်း အဓမ္မမတရားမှုတွေကို လုပ်ကြရမှာလား..ဆင်းရဲမှုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုအရ အရင့် အရင်ဘ၀တွေက..ဒါနနည်းခဲ့လို့.သူတစ်ပါးကို ကူညီပေးကမ်းမှုနည်းခဲ့လို့..မိမိက လူသားတွေကောင်းကျိုးတွေ မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်..
ယခုပစ္စုပ္ပန်ဘ၀ ကြိုးစားရုန်းကန်လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်သော်လည်း အဆင်မပြေတွေနဲ့ တွေ့နေရခြင်းသည်..ကုသိုလ်သတ္တိနည်းနေသေးသောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏..
ထိုကြောင့် မိမိအားနည်းချက်ကို မိမိသိပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ပင်
ဥာဏ်ရှေ့သွားပြုပြီး တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်သင့်ပေသည်...။
မှားယွင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်ဖြင့်..သူတစ်ပါး မျက်ရည်ကျမှ မိမိချမ်းသာရမည့်အလုပ်မျိုးနဲ့
..ဘ၀ကို တိုးတက်အောင် မကြံဆောင်သင့်ပေ..။
မိမိအပြုအမှု မိမိအလုပ်အကိုင်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်
ဖြစ်ရခြင်းသည် မိမိအတွက်လည်း စိတ်ချမ်းသာစရာမကောင်းသလို
ခံစားရသူ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း နစ်နာစရာဖြစ်ပါသည်..
ထိုကြောင့် မိမိတို့သည် မိမိတို့၏ ကာယကံမှု ၀စီကံမှုတို့ကို
ဥာဏ်ပညာ ရှေ့သွားပြုပြီး လုပ်ကိုင်ကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်...
ယခုဘ၀ မသေခင်လေး..ဒါနဆောက်တည်ခြင်း သီလဆောက်တည်ခြင်း..
Posted by yankin at 5:47 AM No comments:
ကံတရားအယူအဆနှင့် လူမှုရေး အကျိုးအမြတ်ရှိသော လုပ်ဆော...